Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaaraha Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay Wargeysada Yurub Qoreen
Home Sports news Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaaraha Ee Maanta Oo Isniin Ah Ay...
Suuqa iibka ciyaartoyga ayaan si rasmi ah u furmin, laakiin waxay kooxaha qaarkood ku dhawaaqeen heshiisyo ay la gaadheen ciyaartooyo u iman doona marka ay dhamaadaan kulamada xili ciyaareedka ee dib loo bilaabay.
Chelsea ayaa ka mid ah naadiyadan oo gacanta ku dhigtay weeraryahanka Timo Werner, laakiin si guud suuqa ayaa u xidhan, waxaana si joogto ah usoo baxaya qorsheyaasha kooxaha waaweyn ay damacsan yihiin iyo ciyaaryahannada ay u dhaqaaqi doonaan sidii ay ula soo wareegi lahaayeen.
Wargeysyada Yurub ayaa maalin walba daabaca wararkii ugu dambeeyey ee suuqa, xanta hoose ee aan wali bannaanka usoo bixin, tibaaxaha lasoo dusiyey iyo sawirka uu yeelan doono suuqu marka uu dib u furmo.
Sidii aad nooga barateen, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee maanta oo Isniin ah ay qoreen wargeysyada waaweyn ee Yurub:
Liverpool ayaa kaga horreysa Manchester City tartanka ay labada kooxood ugu jiraan difaaca Napoli iyo Senegal ee Kalidou Koulibaly. 29 jirkan ayuu Jurgen Klopp heshiiskiisa u isticmaalayaa Dejan Lovren iyo lacag. (Tuttosport)
Agaasimaha Inter Milan ee Giuseppe Moratta waxa uu sheegay in kooxdiisu ay ‘wada-xaajood meel fiican maraya’ kula jirto laacibka amaahda kula jooga Borussia Dortmund ee Achraf Hakimi, ayna kasoo iibsanayso Real Madrid 21 jirkan reer Morocco. (Goal)
Moratta waxa kale oo uu sheegay in Inter ay sidoo kale ka shaqaynayso inay kordhiso heshiiska amaahda ah ee laacibka ay Manchester United amaahda kaga qaadatay ee Alexis Sanchez oo 31 jir ah, laakiin wada-hadalka ayaa caqabado la kulmaya. (Sky Sports Italia)
Chelsea waxay war fiican ka heshay tababaraha kooxda Ajax ee Erik ten Hag oo shaaciyey in 27 jirka difaaca uga ciyaara kooxdiisa ee Nicolas Tagliafico oo reer Argentine ah iyo goolhayaha Cameroon ee Andre Onana oo 24 jir ah, ay ka tegi karayaan kooxdiisa xagaagan. Ten Hag waxa kale oo uu xaqiijiyey suurtogalnimada ah in 23 jirka khadka dhexe ee Donny van de Beek oo Man United diiraddu u saaran tahay, inuu ku taagan yahay dariiqii uu kooxda kaga bixi lahaa. (Express)
Manchester City waxay qarka u saaran tahay weeraryahanka Juventus ee Pablo Moreno oo ah 18 jir u dhashay Spain, waxaana dhinaca kooxda Talyaaniga tegaya Felix Correira oo ah 19 jir reer Portugal ah oo City ka tirsan. (Goal)
Khadka dhexe ee Barcelona iyo Brazil ee Arthur oo 23 jir ah, waxa uu Juventus la gaadhay heshiis shan sannadood ah oo qiimihiisu yahay £72.5 milyan. Heshiiska waxa qayb ka ah kubbad-sameeyaha Bosnia and Herzegovina ee Miralem Pjanic oo ah 30 jir Juve ka tirsan oo tegi doona Barcelona, qiimihiisuna yahay £60 milyan. (Sky Sports)
Kabtanka Aston Villa ee Jack Grealish oo 24 jir ah, waxa uu kusii dhowaanayaa inuu ku biiro Manchester United, waxaanu guri ka iibsaday gobolka North West ee Magaalada Manchester ku taallo. (Express)
Inter Milan waxay ka fikiraysaa in xagaagan ay iibiso difaaceeda reer Slovakia ee Milan Skriniar oo ah 25 jir ay doonayso kooxda Manchester City. Weeraryahanka reer Argentine ee Sergio Aguero ayaa la sheegay inuu qayb ka noqon doono heshiiska oo uu Inter Milan tegi doono. (Calciomercato)
Weeraryahanka reer Ivory Cost ee Salomon Kalou oo 34 jir ah, una soo ciyaaray Chelsea, waxa uu ku dhow yahay inuu heshiis u saxeexo kooxda reer Brazil ee Botafogo oo uu ku biiri doono marka uu dhamaado heshiiskiisa Hertha Berlin. (Yaoo Sports)
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo Magacaabay Guddoomiyeyaal Cusub – Goobjoog News
Next articleAkhriso: War-murtiyeed Ka Soo Baxay Golaha Wakiillada Puntland
‘Sidaad Mooday Maaha, Real Madrid Waa Laga Badin Doonaa, Adiguna Berri Si Kale Ayaad U...
Xasan Sheekh “Madasha Xisbiyada Qaran Waxay Dhiira Gelinaysaa Shirka Maxda Maamul Goboleedyada ” – Goobjoog...
somali news July 11, 2020
“Madaama Aan Ahay Afrikaan Ma Matali Karo Dal Ay Sinaansho Ka Jirin”
Manchester United Oo Ku Tumatay Brighton, Fernandes & Greenwood Oo Wacdaro Dhigay & Reds Oo...
Sports news July 1, 2020
Madaxweynaha Shiinaha oo Soomaaliya ugu Hambalyeeyey Xuska 60 Sano Guurada Xornimadeeda – Goobjoog News
somali news July 1, 2020